Netizen Report: Dimy Volana Taorian’ny Fisamboran’ny Houthis Azy, Navotsotra Ilay Bilaogera Mpiaro Ny Zon’Olombelona Hisham Al-Omeisy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Janoary 2018 16:38 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Español, Português, Français, English
Hisham Al-Omeisy miaraka ny zanany roa lahy. Sary nozarain'i Iona tao amin'ny Twitter.
Navotsotra ilay bilaogera sady mpanao gazety Yemenita Hisham Al-Omeisy ary tafaraka tamin'ny fianakaviany tany Yemen tamin'ny 15 Janoary, rehefa avy nogadrain'ny tafika Houthi nandritra ny dimy volana mahery. Nosamborin’ireo manamboninahitra tao amin'ny Birao misahana ny Fiarovam-pirenena fehezin'ny Houthi tao an-drenivohitra Sana'a i Al-Omeisy tamin'ny volana Aogositra 2017.
Manana mpanjohy maherin'ny 35.000 ao amin'ny Twitter, mavitrika amin'ny sioka sy bilaogy momba ny krizy maha-olona sy ny fanitsakitsahana zon'olombelona nataon'ireo antoko roa mpifandrafy i Al-Omeisy. Talohan'ny fisamborana azy, nanadihady sy niresaka momba ny fifanandrinana amin'ny media iraisam-pirenena izy, anisan'izany ny BBC, CNN, Al Jazeera, Deutsche Welle, NPR ary ny TRT World.
Tsy afaka nifandray tamin'ny mpisolovava na ny vadiny sy ny zanany roa lahy izy raha mbola tany am-ponja.
Na dia faly aza ny fianakaviany sy ny namany tamin'ny fiverenany, dia manahy ny momba ireo Yemenita maro hafa niharan'ny fanjavonana noterena izy ireo, na teo am-pelantanan'ny Houthis na ny fikambanana tarihin'ny Saodiana miady amin'izy ireo izany.
Maneho hevitra momba ny famotsorana an'i Al-Omeisy, bilaogera sady mpanao gazety namana Afrah Nasser nisioka hoe:
Na dia diso faly aza aho fa navotsotra i Hisham @omeisy, marary ny foko noho ireo tovolahy hafa nampanjavonan'ny Houthis an-katerena, izay tovolahy tsy ao anatin'ny media, ary tsy mba fantatsika ny anaran'izy ireo, na ny renin'izy ireo na ny anabavin'izy ireo, mitalaho isan'andro i @abducteesmother mba hamotsorana azy ireo .. #yemen
Mpanao gazety Pakistaney notafihana noho ny fanakianana tamin'ny media sosialy
Notafihan'ireo lehilahy maromaro mitam-piadiana niezaka naka an-keriny azy tao Islamabad ilay mpanao gazety Pakistaney malaza sady mpisera media sosialy malaza, Taha Siddiqui. Na dia afa-nandositra tsy naratra mafy aza i Siddiqui, dia nalain'ireo mpanafika ny solosaina findainy, ny findainy sy ny pasipaorony. Nanakiana mafy ny fametrahana miaramila tao amin'ny media sosialy i Siddiqui. Tamin'ny May 2017, nampanantsoin'ny elatra manohitra ny fampihorohoroana ao amin'ny Sampan-draharaha Federaly ho an'ny Fanadihadiana Sivily izy ary nangatahana mba hanome ny solosainy ho atao fanadihadiana. Nametraka fitoriana an'ity sampan-draharaha ity, izay notohanan'ny Fitsarana Avon'i Islamabad i Siddiqui.
Mikasa handràra ny tranokalam-baovao mahaleotena i Filipina, tohanan'i Duterte ny fandraràna
Nesorin'ny Komitin'ny Fiarovana sy ny Fifanakalozana ao Filipina (SEC) ny fahazoan-dàlana hiasa an'ny Rappler, tranokalam-baovao sy media sosialy. Milaza ny fanapaha-kevitry ny SEC fa “manitsakitsaka ny lalàmpanorenana sy ny sata momba ny Famerana ny Zon'ny Vahiny amin'ny haino aman-jery” ny Rappler noho izy nandray fanomezana avy amin'ny Omidyar Network, fikambanana noforonin'ny mpanorina ny eBay, Pierre Omidyar.
Raha mametra ny fananana haino aman-jery sy fifehezana orinasa an'ny Filipina ny lalàmpanorenana Filipiana, tsy mandràra ny fanomezana ara-bola avy amin'ny fikambanana vahiny kosa izy. Orinasan'ny Filipiana sy tantanin'ny Filipiana 100 isan-jato ny Rappler.
Nanenjika ny Rappler ny filoham-pirenena Filipina, Rodrigo Duterte tamin'ny Kabariny ho an'ny Firenena tamin'ny Jolay 2017, miampanga fa “Amerikana tanteraka no tompon'ny tranonkala Rappler.”
Noraràn'ny Emirà Arabo Mitambatra ny tolotra VoIP – misy ny fanangonan-tsonia manohitra ny fandraràna
Taorian'ny fanakànana tolotra tranonkala maromaro izay manome feo sy antso an-dahatsary maimaim-poana- tahaka ny Skype, WhatsApp sy Viber – manakana ny ezaky ny mponina hanohitra ny fandraràna ankehitriny ny manampahefana ao EAM. Tamin'ny faran'ny Desambra 2017, nanao fangatahana i Mostafa Amr, mitaky ny mpandrindra ny fifandraisandavitra ao amin'ny firenena, miaraka amin'ireo mpanome tolotra fifandraisan-davitra malaza Etisalat sy Du, mba hamerina hametraka ny tolotra VoIP ao EAM. Tamin'ity herinandro ity, nosakanan'ny manampahefana ny sehatra tranonkala Change.org, izay nanaovana ny fanangonan-tsonia.
Nosoratana amin'ny solompanondroana voalohany (izaho), mandrisika ny manampahefana mba handinika indray ny fanakanana ny fanangonan-tsonia mba hanampiana ny fianakaviana hifandray amin'ny alalan'ny tolo-pifandraisana mora. Nanoratra i Amr hoe:
Iankinan'ny ain-dehibe sy ilain'ny fianakaviana maro monina ao Emirà Arabo Mitambatra sy mila mifandray amin'ny havany monina any ivelan'ny EAM ny VoIP. Marobe ireo mponina ao EAM izay manana fianakaviana sy namana monina any ampitan-dranomasina ary ny fomba tsotra sy malalaka hifandraisana amin'izy ireo ny VoIP.
Manenjika mpanao gazety ao amin'ny Facebook ny mpandrindra media Ejypsiana
Nilaza tamin'ny fanambarana ho an'ny daholobe ny lehiben'ny Filan-kevitry ny Media Nasionaly ao Ejypta fa tokony ho tompon'andraikitra amin'ny hafatra alefan'izy ireo ao amin'ny Facebook ny mpanao gazety. Nanambara i Makram Mohammed Ahmed hoe: “Raha sehatra famoahana votoaty ho an'ny olon-drehetra ny Facebook, dia hodinihina ny zavatra rehetra avoaka ao, raha fanevatevana na fanalam-baraka. Ary raha misy ny fitarainana tonga any amin'ny Filan-kevitra Faratampony Mpandrindra ny Media, dia hijery izany izahay ary hamoaka fanapahan-kevitra avy hatrany.”
Mitsidika an'i Chongqing? Jereo ao ianao
Vao haingana ny tanàna atsimo-andrefan'i Chongqing, Shina no nanomboka fandaharan'asa fitaratra ho an'ny teknolojia famantarana endrika antsoina hoe “Xue Liang”, midika hoe “Maso Maranitra”. Ahitana angona fanaraha-maso an-dahatsary nangonina tamin'ny fakantsary miafina eny an-dalambe sy ny trano fonenana miaraka amin'ny “Police Cloud” ao Shina ny fandaharan'asa, ary ahitana angona marobe momba ny tahiry manokan'ireo olom-pirenena Shinoa, anisan'izany ny laharam-pamantaran'azy ireo sy ny sary voavakin'ny milina.
Namely ny Bitcoin ny sampan-draharaham-pitsikilovana Pakistaney
Tamin'ny tatitra tsy maintsy omena ny parlemanta Pakistaney – izay nahemotra efa ho herintaona – nangataka tamin'ny governemanta ny Sampan-draharaham-pitsikilovana Federaly mba hanameloka ny fampiasàna Bitcoin ary manasazy izany eo ambany ny Lalànan'ny Heloka Bevava Elektronika 2016b ao Pakistana.
Efa nandresy tamin'ny fifidianana 2018 (araka ny aterineto) sahady i Vladimir Putin
Nandritra ny 20 minitra teo ho eo tamin'ny 15 Janoary, namoaka pikantsary avy amin'ny lahatsoratra mitovy amin'ny Wikipedia ny fikarohana tao amin'ny Google amin'ny teny Rosiana momba ny “fifidianana 2018″, izay nanambara an'i Vladimir Putin ho mpandresy amin'ny fifidianana izay mbola hatao. Niseho ity fahadisoana mahavariana ity noho ny teknolojia voka-pikarohana ao amin'ny Google, izay indraindray mampiseho vaovao avy amin'ny Wikipedia na tranonkala hafa izay mety hamaly ny fangatahan'ny mpiserasera. Amin'ity tranga ity, nilaza fohy an'i Putin ho mpandresy ny tranonkala Rosiana ao amin'ny Wikipedia, fahadisoana izay voavaha fotoana fohy taorian'ny niparitahan'ny vaovao tao amin'ny media sosialy.
Mandritra ny hetsi-panoherana, mitatitra fitrohana (downloads) betsaka indrindra avy any Iran ny Psiphon
Nitatitra ny fitaovana fialàna amin'ny sivana Psiphon fa nitombo avo 20 heny ireo mpiseraserany hatramin'ny nipoahan'ny hetsi-panoherana manerana an'i Iran tamin'ny faran'ny taona 2017. Nakatona matetika ireo sehatra tranonkala sy fampiharana malaza, toy ny Telegram sy Instagram nanomboka tamin'izany, ka nahatonga ny Iraniana tsy afaka mifandray tampoka ao amin'ireo sehatra ireo tsy mila mampiasa fitaovana manokana – tahaka ny Psiphon – mba hialàna amin'ny sakana. Mpiserasera valo hatramin'ny folo tapitrisa isan'andro avy any Iran ankehitriny no mampiasa ny fampiharana (Psiphon).
Tambanjotram-piarahamonina: Ny Aterineto avy amin'ny olona, ho an'ny olona – Getulio Vargas Foundation, Brezila
Feo, fahitana sy karazana habibiana: Fikarohana Maleziana momba ny zava-misy iainan'ny vehivavy ao amin'ny media sosialy – Fikambanana ho an'ny Fifandraisana Mandroso
Afef Abrougui, Ellery Roberts Biddle, Mohamed ElGohary, Weiping Li, Karlo Mikhail Mongaya, Karolle Rabarison, sy Juke Carolina Rumuat no niara nanoratra ity lahatsoratra ity.